Camera IQ: Ampiasao ny Augmented Reality (AR) hamoronana fanandramana vokatra virtoaly | Martech Zone
Camera IQ: Ampiasao ny Augmented Reality (AR) hamoronana fanandramana vokatra virtoaly
Alakamisy, Jolay 15, 2021 Alakamisy, Jolay 15, 2021 Douglas Karr
Camera IQ, sehatra famoronana tsy misy kaody ho an'ny Augmented Reality (AR), efa natomboka Composite virtoaly andramana, fitaovana famolavolana manara-penitra izay mahatonga azy io haingana sy mora ho an'ny marika amin'ny hatsarana, fialamboly, fivarotana ary sehatra hafa hananganana zava-baovao Fanandramana virtoaly miorina amin'ny AR traikefa. Ny vahaolana vaovao dia sary an-tsaina ny varotra AR amin'ny alàlan'ny famelana ireo marika handika nomerika ny vokatr'izy ireo amin'ny zava-misy marina sy fiainana misy eo amin'ny fiainana an-tany miaraka amina singa marobe sy haavo miavaka izay mampifandray sy manome aingam-panahy ireo mpanjifa amin'ny alàlan'ny fakantsary.
Raha toa ny vahaolana hafa dia mitaky fomba fanoratana amina fotoana lava na fomba fanamboarana na famokarana lehibe sy fivoarana, ny Virtual I-Virtual Composer an'ny Camera IQ dia manamora ny fanamboaran'ireo marika ny traikefa namboarina (AR) be pitsiny namboarina tamin'ny ambaratonga kely, miaraka amin'ny tsy mila kaody. Ny fitaovana dia manome karazana safidin'ny fanamboarana izay manome ny manovaova ny marika hanamboarana mora foana ny traikefa AR miaraka amin'ny masontsivana manokana toy ny loko, endrika, endrika, famaranana, sns. Na afaka mampakatra ny maodely 3D azy ireo fotsiny izy ireo, ary ny Composite virtoaly andramana mandeha ho azy mandika ny vokatra ao amin'ny fakan-tsary hahafahan'izy ireo tafiditra ao anaty fampielezan-kevitra.
Tsy toy ny hafa teknolojia fanandramana virtoaly, on Camera IQ, marika dia afaka manatsara ny traikefa ananan'izy ireo ny fanandramana virtoaly miaraka amina singa an-tsary natao hanatsarana ny fifamatorana, ny fifandraisana ary ny fizarana. Ny Composer Virtual Try-On dia miaraka amina tranomboky misy môdely voafantina natao hahatratrarana tanjona kendrena manokana toy ny fampitomboana ny fahatsiarovan-tena momba ny famoahana ny vokatra, ny fitarihana ny varotra miaraka amin'ny fampisehoana sary an-tsaina ny vokatra sy ny fampiharana, ny fampianarana ireo mpanjifa amin'ny fomba fampiasana ny vokany, sy maro hafa. Ny marika dia afaka manamboatra an'ireto modely traikefa amin'ny AR ireto, ary mamolavola ireo fiasa mifandraika amin'ny zavatra niainany tamin'ny alàlan'ny fampidirana trangam-bika mba hiseho na fihetsika mety hitranga amin'ny trangan-javatra sasany, toy ny fisokafan'ny mpampiasa ny vavany na ny fikasohany zavatra iray. Ny fakantsary IQ avy eo dia mamoaka traikefa AR amin'ny ambaratonga manerana ny Facebook, Instagram, Snapchat, sy ireo sehatra hafa, ahafahan'ny mpihaino manokatra ny fomba famoronany raha manandrana ny vokatra marika saika.
Ny famoahana farany ny Camera IQ dia mpanova lalao ho an'ny ekipako. Ny UI vaovao dia mahery vaika ary mora miovaova. Ny fahaizana mampiditra fananana 3D ary manodinkodina azy ireo amin'ny tontolo 3D tena izy dia ahafahana mitondra haingana sy haingana ny famonoana antsika hamorona.
Doug Wick, talen'ny famolavolana votoaty ao amin'ny Nestlé Purina Amerika Avaratra
Mpanoratra Virtual IQ Virtual Try-On Composer
Ny fakantsary IQ dia mamela ny marika hiditra amin'ny mpihaino sy hivarotra vokatra saika amin'ny lafiny rehetra amin'ny dian'ny mpanjifa. Amin'ny fampiasana ny sehatra famolavolana kaody tsy misy code ho an'ny varotra AR, ny mpivarotra dia afaka manova ny vokatrao sy ny hafatra marika ho lasa fanandramana be dia be ho an'ny fanandramana virtoaly sy fanentanana ho an'ny mpanjifa amin'ny sosialy.
Amin'ny maha ekipa manerantany manompo marika iraisam-pirenena toa ny Viacom, Atlantic Records, Nestle, EA, MAC Cosmetics, Away, sy ny maro hafa, ny Camera IQ dia miasa manerana ny indostria hampiasain'ny mpanjifa an-tapitrisany isan'andro isan'andro.
Tsy misy isalasalana ny amin'ny fahombiazan'ny AR ho an'ireo andrana virtoaly, fa izany no fiandohan'ny zavatra azon'ny AR atao mba hampifanakaiky ny marika sy ny mpihaino azy ireo. Tsy ny AR ihany no afaka mitondra fiara ara-tsosialy amin'ny alàlan'ny fanampiana ny mpanjifa hijery ny vokatra, fa ahafahan'izy ireo mifanerasera amin'ny marika amin'ny fomba vaovao amin'ny alàlan'ny asa famoronana. Rehefa manambady ny mahasoa sy mahafinaritra ny AR ny marika, dia amin'izay izy ireo mahita ny fiatraikany lehibe indrindra amin'ny ROI azy ireo: mirongatra ny tahan'ny fifamatorana, ary mitombo 250% ny mety hisian'ny fiovam-po. Nalefanay ny Composer Virtual Try-On mba hanampiana ny marika hanafaingana ny paikadin'izy ireo amin'ny varotra, hampihena ny sakana amin'ny fampandrosoana ary hanamora ny fananganana traikefa AR azo ampiharina sy mahasarika. Ankehitriny ny marika rehetra dia mety ho mpamorona AR!
Allison Ferenci, CEO ary mpiara-manorina ny Camera IQ
Ho fankalazana ny famoahana ny vokatra vaovaon'ny Virtual Try-On vaovao, ny Camera IQ dia niara-niasa tamin'ny mpanakanto makiazy nalaza sy nahazo loka, anisan'izany ny David Lopez, Keita Moore, Doniella Davy, ary Erin Parsons mamorona endrika makiazy nomerika izay mamerina ny kanto fanaovana kanto nentin-drazana. Ny marika hatsaran-tarehy dia afaka manome hery ny mpihaino azy hanandrana izay mitambatra lokomena, mena, eyeshadow, eyeliner, volomaso, na kojakoja rehetra, samy manana loko, endrika, firafitra, famaranana, ary singa hafa hifanaraka amin'ny vokatra tena izy izy ireo.
Ny marika antsinjarany dia afaka manao nomerika mora foana ny vokatra ara-batana ananany mba hamoronana traikefa ahafahan'ny mpanjifa maka sary an-tsaina ny fisehoan'ny vokatra misy eo amin'ny tontolo tena izy, na ny marika mozika dia ahafahan'ny mpankafy mamorona endrika sonia mpanakanto avy amina rakotra horonantsary na rakikira. Ny habetsaky ny zavatra iainana Virtual Fanandramana izay azo hatsangana ao amin'ny Composer an'ny Camera IQ dia tsy misy fetrany.
Andramo ny AR an'ny Camera IQ Mangataha Demo
Tags: augmented zava-misyfakantsary iqecommercefanandramana vokatrafanandramana vokatra virtoalyComposite virtoaly andramanateknolojia fanandramana virtoaly
YouTube: Ahoana ny fomba hanomezana ny fahafahanao misafidy na mpamaky sary miaraka amin'ny fidiran'ny mpampiasa ny fantsonao
Moz Local: Ampitomboy ny fanatrehanao an-tserasera an-toerana amin'ny alàlan'ny lisitra, laza ary fitantanana tolotra